Archive du 20191203
Rajoelina sy Rakotovao Ady tsy mety vita
Nahena 5 miliara ariary eo ny tetibolan’ny Antenimierandoholona, raha niainga tany amin’ny 50 na 40 miliara ariary no najotson’ny fanjakana Rajoelina.
Hosoka tao Anosizato Andrefana Ny sefo fokontany no fositra hoy ireo delege
Nivondrona nanao fanambarana ireo Delegen’ny Birao fandatsaham-bato teny Anosizato Andrefana ny Sabotsy lasa teo. Maro loatra hoy izy ireo ny hosoka sy ny teritery nataon’ny Sefo fokontany teny nandritra iny fifidianana ben’ny tanàna lasa teo iny.
Olga Ramalason Miantso ny mpitsara hihaino ny feon`ny fieritreretany
Ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) dia eo am-panangonana ireo porofo maro isan-karazany izay mitory tsy fanarahan-dalàna nataon`ireo mpikirakira fifidianana sy mpitantana fifidianana.
Governoram-paritra Lasa niofana any Sina
Nanomboka omaly alatsinainy 02 desambra hatramin’ny alahady 15 desambra izao dia any Sina ny ankamaroan’ny governoram-paritra manatrika fiofanana mikasika ny fitantanana sy fanamafisana ny vondrom-bahoakam-paritra.
Demokrasia eto Madagasikara “Mbola lavitra ny lalan-kaleha”
Nampalahelo ny havitsian’ny olona tonga nifidy, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika ABA, Dany Rakotoson.
Mikatso ny famoahana “Permis biométrique” Vola tsy voaloa sa milina simba no olana ?
Miato efa ho herinandro mahery izao ny fanaovana ny “ Permis biométrique” sy taratasin’ny fiarakodia eny Ambohidahy, izay lazaina fa olana teknika amin’ny milina no antony.
Masoivoho Afrikanina Tatsimo “Tokony haka lesona ny mpitondra…”
Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao,
Depiote any am-ponja Mandeha ny tsindry hamoahana azy ireo
Raharaha vono olona no nanenjehana ny depiote Raveloson Ludovic Adrien dit Leva Sydney sy olona 3 hafa ka nampidirana azy am-ponja ny 24 aprily 2019.
Tsisy mafy be izany eto!
Mafampana hatrany ny toe-draharaha politika. Manao randra-tarihina ny kazarana lonilony nateraky ny fifidianana, izay maro no mahatsapa fa lasibatry ny kilalao maloto ara-politika.
Fanomezana vahana ny asa fikarohana Misy fiantraikany amin’ny toekarena
Niditra amin’ny andiany faha-5 ny hetsika fampirantiana ny asa fikarohana na ny Salon de la Recherche au service de l’Economie et de l’Emploi (SREE) izay haharitra 2 andro.
Tsy fanjarian-tsakafo Ambony ny taha any ambanivohitra
Nanamafy ny Ofisim-pirenena misahana ny fanjarian-tsakafo ONN fa ady maro lafy no atao aminy iarahana amin’ireo sampana samihafa toy
Ranom-boankazo, labiera, sigara Hisondro-bidy avokoa
Nakarina ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana (droit d’accise na DA) amin’ireo entana fanjifa tahaka ny ranom-boankazo, ny labiera ary ny sigara.
Analakely Tsy hita popoka ilay tovovavy nandeha nivalan-drano
Tovovavy efa 18 taona i Ando Maya, efa manana fofombady. Nanjavona tsy niverina intsony tao amin’ny efitrano fandraisany olona
Antanimena Teraka teny an-tsisin’arabe ilay Ramatoa
Samy manana ny anjarany ny olombelona tsirairay. Misy vao teraka dia efa any amin’ireny toeram-pitsaboana tsy miankina handoavana volabe ireny, misy koa ireo teraka ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka toy ity nitranga teny Antanimena omaly tolakandro ity.
Toetr’andro Mananontanona ny rivodoza
Nivadika ho rivodoza ilay tangoron-drahona niforona tany amin’ny faritra avaratry ny Nosy raha ny vaovao azo omaly atoandro.
Ady amin’ny herisetra mahazo ny vehivavy Zandary 40 no nanaovana fanentanana
Ny 30 %-n’ ireo vehivavy 13 ka hatramin’ny 49 taona no efa niaina herisetra eto amintsika.
Voahitsaky ny « sémi-remorque » Potipotika ilay lehilahy, niparitaka ny taovany
Nampivarahontsana ny loza nitranga tany Toamasina. Lehilahy iray no maty tsy tra-drano voahitsaky ny “sémi-remorque” omaly tamin’ny lala-mahitsy “Tropical Fruit”
Antsirabe Telo mianaka niharan-doza, maty ny roa
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahery vaika indray tao Andranonahoatra-Antsirabe ny alahady 01 desambra 2019 lasa teo, tokony ho tamin’ny 12 ora atoandro nahery kely.
Tetikasa «QUICK WIN» Antananarivo Hampikorisa ny fitaterana ankatoky ny fety ny polisy
Tonga nihaona tamin’ny mpanao gazety izay notanterahina teo Analakely,